UN ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာျမန္မာ့အတြက္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း Yanghee Lee က စစ္အာဏာသိမ္းတာကို UN ကခ်က္ခ်င္းအေရးယူသင့္ေၾကာင္းCNA interview မွာတိုက္တြန္းလိုက္ၿပီ – Real News
၀၁/၀၂/၂၀၂၁ – ၃:၃၀
နေ့လည် ( CNA)
UN ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာမြန်မာ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Yanghee Lee က စစ်အာဏာသိမ်းတာကို UN ကချက်ချင်းအရေးယူသင့်ကြောင်းCNA interview မှာတိုက်တွန်းပြောကြား ( CNA) ,.
၀၁/၀၂/၂၀၂၁ – ၃နာရီ – CNA news
မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိစ္စအတွက်ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေး ( UN Security Council meeting ) ကျင်းပ လိမ့်မယ်လို့ reports သတင်းရကြောင်း ၊ အောင်ဆန်းစုကြည်အဖမ်းခံထားရကြောင်း ဘိုင်ဒင်ကို brief ရှင်းပြထား တယ် လို့ WH ကကြေညာလို့ ညနေ ၃နာရီ စင်ကာပူ CNA TV ကသတင်းကြေညာ
01/02/2021 ၂ နာရီ (နေ့လည်):CNA Washington သတင်းထောက်ကသုံးသပ်တာကတော့ US President Biden ကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီး အောင်ဆန်းစုကြည့်နဲ့နိုင်ငံသမားတွေကိုလွှတ်မပေးရင် တော့ Potential Action တွေကို White House ကဒီနေ့ သို့ မနက်ဖန် ကြေညာနိုင် ၊ US လွှတ်တော် ၂ရပ် ( house , senate ) မှာအဆိုတင်နိုင် ၊ စင်ကာပူ CNA သတင်းပါ။
CNN Breaking News ကသုံးသပ်တာက အခုမြန်မာအရေးဟာ Us ဘိုင်ဒင်- ကာမလာ Joe Biden-Kamala Harris administration အတွက်အကြီးအကြယ်စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်လာတယ်လို့ CNN ကသတင်းသုံးသပ်သွားပါတယ်
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ကသောင်းကနင်းအခြေအနေ( Myanmar Political Turmoil) ကိစ္စကုသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီအစည်းအဝေး ( UN Security Council )ဒီတပတ်ထဲမှာခေါ်မယ်လို့ အခုလေးတင်စင်ကာပူ CNA သတင်းကကြေညာသွား၊
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တရားဝင်သမ္မတအပါဝင် အမတ်တွေကိုဖမ်းထားတာအတွက်မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကို အကြီးအကျယ်ပြစ်တင် ရှုတ်ချပြောကြား၊ ကုလသတင်းထုတ်ပြန် ။
အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေက မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်အာဏာသိမ်းတာကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချ ၊စစ်တပ်အား ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတည်ပြုရန်တညီတစ်ညွတ်ထဲ တောင်းဆို ( လန်ဒန်အခြေစိုက် Reuters သတင်းကရေး)
အမေရိကန်သမ္မတ ဘိုင်ဒင်ကို မြန်မာ့အရေးအဖြစ်အပျက်အိမ်ဖြူတော်မှာUS President ရဲ့အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေး US National Security Adviser Jake Sullivanအခုတင်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ကြောင်း ကိုWhite Hose ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် ။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Bliken က ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့မြနမာစစ်ခေါင်းဆောင်ကိုတောင်းဆို
ဩစတေလျှ ဝန်ကြီးချုပ် Scott Morrison ကလည်း မြန်မာအခြေအနေ ဆက်လုပ်စရာများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေဟုပြောကြား၊ CNA news ,.
ကုလ၊ Aus ၊ US ၊ Japan ၊ India ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအာလုံးအာဏာသိမ်းတာလက်မခံကြောင်းကြေညာ ၊ CNA သတင်းပါ
အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော် White House သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Jen Psaki ကလည်း မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအရေးယူဖို့ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီ၊
အမေရိကန်က မြန်မာအာဏာသိမ်း တာနှင့် ဒီမိုကရေဆီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုမြန်မာစစ်တပ်က အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့လုပ်ရပ်အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေအားလုံး( စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ) ကို အရေးယူ မယ်လို့ ပြောပြီ၊ အမေရိကန်ကပြောကြောင်းကို CNA စင်ကာပူသတင်းအခုbreaking news ကကြေညာနေပြီ ။
US says it will take action against those responsible for political crisis in Myanmar.
US says it is alarmed reports of Myanmar military undermining democratic transition
US ထုတ် The Wall Streets Journal ကလည်း အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာအရေးရပ်တည်ချက်ကိုရေး
Australia ကလည်း အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဖမ်းထားသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်လွတိဖို့ပြောပြီ၊
အခု စင်ကာပူ CNA ( braking news ) သတင်းပါ ။